Ig codigosfreefire.gratis Notice Ogeysiis sharci ah】
Ogeysiiskan Sharciga ah ujeedadiisu waa inuu kugu wargaliyo xuquuqda aad leedahay iyo waajibaadkaaga sida isticmaale ee shabakadan. Halkaan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka aad uga baahan tahay websaydhkan, howlaheeda, macluumaadka shakhsiyadeed ee uu aruurinayo iyo ujeeddadiisa, iyo sidoo kale qawaaniinta adeegsiga ee nidaaminaya isticmaalka degelkan.
Waqtiga aad gashid degelkan https://codigosfreefire.gratis/, Waxaad u qaadanaysaa xaaladda isticmaale, sidaa darteed waxa ku jira Ogeysiiskaan Sharciga ah si toos ah ayuu kuu saameyn doonaa. Sidaa daraadeed, waa muhiim inaad aqriso si aad meesha uga saarto wixii shaki ah ee aad qabtid iyo inaad fahamto shuruudaha aad aqbasho.
Si aad u bilowdid, waa inaad ogaataa in degelkani uu u hoggaansan yahay qawaaniinta hadda jira ee ku saabsan ilaalinta macluumaadka, si uu kuu siiyo dammaanadda, amniga iyo daah-furnaanta, sida adeegsade ahaan, ay kugula soo xiriiraan marka la isticmaalayo websaydhkan.
El RGPD (Xeerka (EU) 2016/679 ee baarlamaanka Yurub iyo Golaha Abriil 27, 2016 ee ku saabsan ilaalinta dadka dabiiciga ah) oo ah qawaaniinta cusub ee midowga yurub ee mideeya qawaaniinta ka shaqeynta xogta shaqsiyadeed ee wadamada kaladuwan ee EU.
La LOPD (Sharciga dabiiciga ah 15/1999, ee Diseembar 13, ilaalinta Ilaalinta Xogta Shakhsi ahaaneed y Amarka Boqortooyada ee 1720/2007, ee Diseembar 21, Shuruucda horumarinta LOPD) sharciyeynaysa daaweynta xogta shaqsiyeed iyo waajibaadka saaran kuwa mas'uulka ka ah websaydh ama blog ay tahay inay qaataan markay maareeyaan macluumaadkan.
La LSSI (Sharciga 34/2002, ee Luulyo 11, ee Adeegyada Bulshada Macluumaadka iyo Ganacsiga Elektaroonigga ah) kaas oo nidaamiya macaamil ganacsi dhaqaale qaab elektiroonig ah, sida ku xusan balooggan.
Qofka mas'uulka ah iyo milkiilaha degelkan waa https://codigosfreefire.gratis/
Magaca Hore: https://codigosfreefire.gratis/
Waxqabadka bogga: qaybinta waxyaabaha la xiriira Ciyaaraha Fiidyowga, bandhigyada xayeysiinta, iyo ku talinta alaabada ku xiran.
mail elektarooniga ah: [emailka waa la ilaaliyay]
Xogta aad na siiso ogolaanshahaaga, iyo sida ku xusan adeegsiga lagu aasaasay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, waxaa lagu dari doonaa fayl otomaatig ah oo si toos ah uga diiwaangashan Hay'adda Isbaanishka ee Ilaalinta Xogta, taas oo qofka mas'uul ka ah faylka lagu sheegay inuu yahay: http://gemasclashroyale.com/ Tan macnaheedu waa in xogtaada ay amaan tahay, marka loo eego waxa sharciga aasaasay.
XEERARKA XAQIIJINTA Websaydhka
Markaad isticmaaleysid degelkeena, waxaad sidoo kale leedahay waajibaadyo dhowr ah:
Ma awoodi doontid inaad u adeegsatid degelkan inaad fuliso howlo ka hor imanaya sharciga, anshaxa, kala-dambaynta guud iyo, guud ahaan, inaad u isticmaasho si waafaqsan shuruudaha lagu sameeyay Ogeysiiskaan Sharciga ah.
Ma awoodi doontid inaad ku sameysid xayeysiin ama hawlo dhiig-miirasho ganacsi adoo diraya farriimo adeegsanaya aqoonsi been ah.
Adiga kaliya ayaa mas'uul ka noqon doontaa saxnaanta iyo sax ahaanta waxyaabaha aad geliso websaydhkan iyo macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee aad na siiso ulajeeddooyinka ku xusan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Waxaad sidoo kale masuul ka noqon doontaa fulinta nooc kasta oo sharci darro ah, waxyeelo leh, waxyeello leh iyo / ama waxyeello u geysata bogagga dhinac saddexaad oo aan kuu gudbin karno degelkan si aan u horumarinno howlaheenna.
Sida mas'uul ka ah websaydhka, https://codigosfreefire.gratis/ Waad joojin kartaa adeega bogga ee adeegsadaha isla markaaba xallin kara xiriirka haddii ay ogaato adeegsiga websaydhka ama adeeg kasta oo lagu soo bandhigo oo loo tixgelin karo inay ka soo horjeedaan waxa lagu muujiyay. Digniin sharci ah.
DHAQAALAHA IYO DHAQANKA AQOONSIGA
Boggan shabakadda oo dhan (qoraalka, sawirada, calaamadaha ganacsiga, sawirada, calaamadaha, badhamada, faylalka kombiyuutarka, isku darka midabada, iyo sidoo kale qaab dhismeedka, xulashada, qaban qaabada iyo soo bandhigida waxa ku jira) waxaa ilaaliya sharciyada hantida ee hadda jira. Maskaxda iyo Warshadaha, abuurkiisa, baahintiisa, isgaarsiinta dadweynaha iyo isbadalkiisa waa mamnuuc, marka laga reebo isticmaalka shaqsiyeed iyo mid gaar ahaaneed.
Sida milkiilaha boggan, https://codigosfreefire.gratis/ dammaanad kama qaadayso in waxyaabaha ku jira sax yihiin ama khalad-yihiin ama in si xor ah isla istcimaalayaasha adeegsadayaashu aysan u xadgudbin xuquuqda dhinacyada saddexaad. Isticmaalka wanaagsan ama xun ee boggan iyo waxa ku jira ayaa mas'uul ka ah adeegsadaha.
Sidoo kale, wadarta guud ama qayb ka mid ah soo-saarista, dib-u-gudbinta, koobiyeynta, wareejinta ama dib-u-soo-celinta macluumaadka ku jira bogga, wax alla wixii ujeedkiisa ah iyo habka loo adeegsado, waa reebban yihiin, iyada oo aan oggolaansho hore laga helin http://gemasclashroyale.com/
LIISKA AMA LAMBARADA
Websaydhkan waxaa ku jira xiriiriyeyaal ama xiriiriyeyaal bogagga saddexaad. Bogagga ay leeyihiin dhinacyadaan saddexaad dib ayaan loo eegin ama waxaa waajib ku ah inaan xakameyno annaga, sidaa daraadeed https://codigosfreefire.gratis/ looma qaban karo masuuliyada waxyaabaha ka kooban websaydhadaan, iyo talaabooyinka la qaatay ee la xiriira qarsoodigooda ama daaweynta macluumaadka shaqsiyadeed ama kuwa kale ee laga soo bixi karo.
Sababahan oo dhan awgood, waxaan kugula talineynaa inaad si taxaddar leh u akhrido shuruudaha isticmaalka, siyaasadda asturnaanta, ogeysiisyada sharciga iyo / ama wixii la mid ah ee bogaggan.
AQOONSIGA AMAZON EE XIRFADAHA
Websaydhkan, iyada oo loo eegayo ujeeddadiisa, ayaa adeegsata xiriiriyeyaasha ku xiran Amazon.
Tani waxay ka dhigan tahay inaad ka heli karto xiriiriyeyaal alaabooyinka Amazon ee aad toos uga geli karto websaydhkeena laakiin, meeshii ay ku habboon tahay, iibsigu waxaa lagu sameyn doonaa Amazon, iyadoo la raacayo shuruudahiisa waqtigaas.
Layliga ku saabsan xuquuqda aad leedahay milkiilaha degelkan, waanu kugula socodsiinaynaa taas https://codigosfreefire.gratis/ mas'uul kama aha kiis kasta oo soo socda:
Tayada adeegga, xawaaraha helitaanka, hawlgalka saxda ah, helitaanka ama sii waditaanka hawlgalka bogga.
Jiritaanka fayras, fayras, barnaamijyo xaasidnimo leh ama waxyeello u leh waxa ku jira.
Si sharci darro ah, dayac, adeegsi been abuur ah ama ka hor imanaya Ogeysiiskan Sharciga ah.
Jiritaan la'aanta sharci ahaanta, tayada, isku halaynta, adeegsiga iyo helitaanka adeegyada ay bixinayaan dhinac saddexaad waxayna u suurto geliyeen isticmaaleyaasha shabakadan.
Dhibaatooyinka ka imaan kara sharci darrada ama si qaldan u isticmaalida balooggan.
SIYAASADDA MADAXWEYNAHA IYO DIIWAANKA MACLUUMAADKA
Websaydhkani wuxuu u hoggaansamayaa xeerarka hadda jira ee ku saabsan ilaalinta xogta, taas oo macnaheedu yahay, isticmaale ahaan, waa inaad bixisaa oggolaanshahaaga hordhaca ah ka hor intaadan na siinin macluumaadka shakhsi ahaaneed iyada oo loo marayo foomamka kala duwan ee laga heli karo qaybaha boggeena.
Sidaas darteed, daahfurnaanta iyo ku shaqeynta xuquuqdaada, waajibkayagu waa inaan kugu wargalinno macluumaadka shakhsiyeed ee aan aruurineyno, keydinno iyo socodsiineyno iyo ujeeddooyinka, annagoo haysanna waqti kasta suurtagalnimada si xor ah looga noqon karo oggolaanshahaaga.
Macluumaadkan oo dhan waxaa laga heli karaa annaga SIYAASADDA MADAXWEYNAHA.
SIYAASADAHA LAGU SAMEEYO
Sida aan kugu wargalinay isla marka aad gasho boggeena websaydhka, boggan wuxuu adeegsadaa kukiyadiisa iyo qolof saddexaadba si ay kuugu siiyaan khibradda isticmaale ee ugu wanaagsan iyo horumarinta howshayada.
Waqti kasta, waxaad haysataa ikhtiyaar aad iskugu habeyso biraawsarkaaga si aad u diiddo isticmaalka cookies-ka, kaas oo, si kasta oo ay tahay, waxay saameyn ku yeelan doontaa khibradahaaga isticmaale.
Si aad u hesho macluumaadka dhammaystiran ee isticmaalka cookies-ka ee websaydhkan, ujeedkiisa iyo diidmadiisa, waad la tashan kartaa SIYAASADAHA LAGU SAMEEYO.
SHARCIYADA SHARCIGA AH iyo SHAQADA SHAQAALAHA
Ogeysiiskaan Sharciga ah waxaa ku hoos jira sharciga Isbaanishka ee hadda jira.
Haddii loo baahdo, kahor nooc kasta oo muran sharci ah, https://codigosfreefire.gratis/ iyo isticmaalaha, isaga oo si cad u diidaya amar kasta oo kale, wuxuu u gudbin doonaa Maxkamadaha iyo Maxkamadaha Degmooyinka adeegsadaha wixii khilaaf ah ee ka soo bixi kara.
Haddii ay dhacdo in isticmaalegu ku nool yahay meel ka baxsan Spain, https://codigosfreefire.gratis/ iyo isticmaaluhu wuxuu u gudbin doonaa, isaga oo si cad u dhaafaya wixii kale oo awood ah, maxkamadaha Cádiz (Spain).
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Ogeysiiskan Sharci, waxaad noo soo diri kartaa emayl ahaan [emailka waa la ilaaliyay].